अस्प’तालबाट मदनकृष्ण श्रेष्ठले लेखे : राजा ज्ञानेन्द्र गेट वेल सुन, रेसपेक्ट यु, लभ यु ! – Online Khabar 24
अस्प’तालबाट मदनकृष्ण श्रेष्ठले लेखे : राजा ज्ञानेन्द्र गेट वेल सुन, रेसपेक्ट यु, लभ यु !
April 30, 2021 April 30, 2021 by admin admin
गत वैशाख ६ मा को’रोना संक्र’मण पुष्टि भएपछि यतिबेला वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्प’तालमा उप’चाररत छन् । आफूसहित परिवारका सबै सदस्यलाई को’रोना भएपछि ६ दिन घरमै बसेका उनी वैशाख १२ मा अस्प’ताल भर्ना भए।
को’रोनाले गम्भी’र स्वा’स्थ्य समस्या ल्याएपछि उनी ललितपुरस्थित मे’डिसिटी अस्प’तालमा भर्ना भएका थिए। मेडिसिटीमै को’रोनासँग जुधिरहेका उनले बिहीबार राति एउटा भावुक स्टाटस लेखे। जहाँ उनले आफूलाई कोरो’नाले फत’क्क गलाए पनि सबैलाई सम्झेर मन भावुक भएको बताएका छन्।
उनले छोटो स्टाटसमा पूर्वरा’जा ज्ञानेन्द्रलाई पनि सम्झिएका छन्। ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमललाई को’रोना पुष्टि भएपछि हाल दुवैजना थापाथली स्थित नर्भि’क अस्प’तालमा उप’चाररत छन्।
अ’क्सि’जनको सपोर्टमा रहेका दुवै जनामध्ये कोमलको अवस्था ग’म्भीर रहेको नर्भिक अस्प’ताल स्रोतले जनाएको छ। ज्ञानेन्द्र र कोमललाई अ’क्सि’जनको मात्रा बढाएर उ’पचार भइरहेको न’र्भिक व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ।
‘आफ्नो शरीर सिंगै कोरो’नाले गले’र ल’ल्याक लुलुक, फतल्याक्क फुत्लुक भइरहेको बेला सबैलाई सम्झेर मन भाबु’क भइरहेको छ आज’, उनले भनेका छन्, ‘सबैलाई एकपल्ट माया पोख्‍न मन लागिरहेको छ।’
उनले पूर्वरा’जा ज्ञानेन्द्रलाई राजाकै रुपमा सम्बोधन गरेर स्वा’स्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। ‘राजा ज्ञानेन्द्र लगायत राज परिवारप्रति पनि शीघ्र स्वा’स्थ्यको कामना ब्यक्त गर्न मन लागिरहेछ’, उनले भनेका छन्, ‘गेट वेल सुन राजन, रेस्पकेट यु, लभ यु !’
Prevसरकारले भन्यो : अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने भयो
nextको’रो’नाका कारण चर्चित भारतिय पत्रकार रोहित सरदानाको निधन